2 Makoronike 26 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Makoronike 26:1-23
26 Vanhu vose+ vaJudha vakabva vatora Uziya,+ paaiva nemakore gumi nematanhatu, vakamugadza+ kuti ave mambo panzvimbo pababa vake Amaziya.+ 2 Ndiye akavaka Eroti,+ akabva aridzorera kuna Judha, pashure pokunge mambo arara nemadzitateguru ake.+ 3 Uziya+ akanga aine makore gumi nematanhatu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore makumi mashanu nemaviri ari muJerusarema. Amai vake vainzi Jekoriya+ wokuJerusarema. 4 Iye akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha,+ maererano nezvose zvakanga zvaitwa nababa vake Amaziya.+ 5 Akaramba achida kutsvaka+ Mwari mumazuva aZekariya, murayiridzi aidzidzisa kutya Mwari wechokwadi;+ uye mumazuva okutsvaka kwake Jehovha, Mwari wechokwadi akaita kuti abudirire.+ 6 Zvino akabuda, akarwa nevaFiristiya,+ akaputsa rusvingo rweGati+ norusvingo rweJabne+ norusvingo rweAshdhodhi,+ achibva azovaka maguta munharaunda yeAshdhodhi+ nepakati pevaFiristiya. 7 Mwari wechokwadi akaramba achimubatsira+ kurwisa vaFiristiya nokurwisa vaArabhiya+ vaigara muGubhaari nomuMeunimu.+ 8 VaAmoni+ vakatanga kupa Uziya muripo.+ Mukurumbira wake+ wakazosvika kuIjipiti, nokuti akaratidza simba zvinoshamisa. 9 Uziya akavakawo shongwe+ muJerusarema pedyo neGedhi Repakona+ uye pedyo neGedhi roMupata+ uye pedyo neChitsigiso choRusvingo, akadzisimbisa. 10 Akavakawo shongwe+ murenje, akachera migodhi yemvura yakawanda (nokuti akava nezvipfuwo zvakawanda kwazvo), uyewo muShefera+ nomunyika yakati sandara. Kwaiva nevarimi nevatarisiri vemizambiringa vaiva mumakomo nomuKameri, nokuti aida zvokurima. 11 Uziya akavawo neuto rairwa hondo, vaya vaibuda kunorwa vakarongwa mumapoka,+ maererano nokuwanda kwokunyoreswa kwavo+ noruoko rwomunyori+ Jeyieri nomutungamiriri Maaseya vachitarisirwa+ naHananiya wemachinda amambo.+ 12 Vakuru vose vedzimba dzemadzibaba,+ varume vakanga vakashinga,+ vaiva nesimba,+ vaisvika zviuru zviviri nemazana matanhatu. 13 Uto ravaitarisira raiva revarume zviuru zvine mazana matatu nezvinomwe nemazana mashanu, vairwa hondo nesimba reuto rehondo kuti vabatsire mambo kurwisa muvengi.+ 14 Uziya akaramba achivagadzirira, iro uto racho rose, nhoo+ nemapfumo marefu+ nengowani+ nenguo dzokuzvidzivirira nadzo dzine simbi+ nouta+ nematombo ezvipfuramabwe.+ 15 Akagadzirawo michina yehondo muJerusarema, yakafungwa nemainjiniya, kuti iiswe pashongwe+ nepamakona, yokupfurisa miseve nokupotseresa matombo makuru. Naizvozvo mukurumbira wake+ wakasvika kure kwazvo, nokuti akabatsirwa zvinoshamisa kusvikira ava nesimba. 16 Zvisinei, paakangova nesimba, mwoyo wake wakazvikudza+ kusvikira pakuita zvakashata,+ zvokuti akava asina kutendeka pamberi paJehovha Mwari wake, akapinda mutemberi yaJehovha kuti apisire rusenzi paatari yerusenzi.+ 17 Mupristi Azariya pamwe chete nevapristi vaJehovha, varume makumi masere vakanga vakashinga, vaiva nesimba, vakabva vamutevera. 18 Vakabva vadzivisa mambo+ Uziya, vakati kwaari: “Haiwa Uziya, harisi basa renyu+ rokupisira Jehovha rusenzi, asi ibasa revapristi vanakomana vaAroni,+ vakatsaurwa, kuti vapise rusenzi. Budai munzvimbo tsvene; nokuti mava asina kutendeka, uye hamungambokudzwi+ naJehovha Mwari.” 19 Asi Uziya akatsamwa kwazvo+ mudziyo wokupisira zvinonhuhwirira+ wokuti apisire rusenzi uchiri muruoko rwake, uye achakatsamwira vapristi, maperembudzi+ akapenya+ pahuma yake pamberi pevapristi ari mumba maJehovha parutivi rweatari yerusenzi. 20 Mupristi mukuru Azariya nevamwe vapristi vose pavakatarira kwaari, vakaona arohwa nemaperembudzi pahuma yake!+ Naizvozvo vakakurumidza kumubvisa ipapo, naiyewo akachimbidza kubuda, nokuti Jehovha akanga amurova.+ 21 Zvino mambo Uziya+ akaramba aine maperembudzi kusvikira pazuva raakafa, uye akaramba achigara mumba asingachaiti mabasa,+ zvaaiva nemaperembudzi; nokuti akanga adziviswa kupinda mumba maJehovha, mwanakomana wake Jotamu paakanga achitarisira imba yamambo, achitonga vanhu vomunyika yacho. 22 Mamwe mabasa ose aUziya,+ okutanga neokupedzisira, akanyorwa nomuprofita Isaya+ mwanakomana waAmozi.+ 23 Uziya akazorara nemadzitateguru ake; naizvozvo vakamuviga pamwe chete nemadzitateguru ake, asi mumunda wemakuva emadzimambo,+ nokuti vakati: “Ane maperembudzi.” Zvino mwanakomana wake Jotamu+ akatanga kutonga panzvimbo pake.
2 Makoronike 26